HomeWararka CiyaarahaSergio Aguero, iyo Ousmane Dembele oo ku soo laabtay tababarka Barcelona
October 12, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain 0
Barcelona ayaa heshay labo xidig oo dhanka weerarka ah kadib markii Ousmane Dembele iyo Sergio Aguero ay labaduba ku soo laabteen tababarka kooxda.
Labada weeraryahan ayaan weli u safan La Blaugrana xilli ciyaareedkan, Aguero ayaa weli sugaya kulankiisii ​​ugu horreeyay ee kooxda ka dib markii uu soo gaaray dhaawac daran oo kubka ah.
Dhanka kale, Dembele – oo si weyn loola xiriirinayo inuu ka tagayo kooxda – ayaa dhaawac jilibka ka soo gaaray isagoo matalaya France Euro 2020 wuxuuna ka soo kabanayay qaliin dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.
Si kastaba ha ahaatee, Aguero iyo Dembele labaduba waxay awoodeen inay ku soo biiraan kooxda kulan subaxnimadii Isniinta, iyadoo kooxda Ronald Koeman ay wajaheyso Valencia isbuucaan ka dib fasaxii xulalka.
Aguero ayaa loo malaynayaa inuu fursad fiican u leeyahay inuu ka soo muuqdo Blaugrana Axadda, iyadoo Dembele uu weli qaadayo tillaabooyinkii ugu dambeeyay ee soo kabashadiisa.
Xiddiga reer France ayaa galay 12 -kii bilood ee ugu dambeeyay heshiiskiisa Barcelona, ​​Liverpool ayaana lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay beeca xorta ah kula soo wareegto xagaaga soo aadan